Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-Omicron ngoku ise-United States: Ingqinwe yi-CDC
Iindaba zeMpilo • iindaba • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Isebe laseCalifornia kunye neSan Francisco lezeMpilo yoLuntu liqinisekisile ukuba imeko yamva nje ye-COVID-19 phakathi komntu waseCalifornia yabangelwa kukwahluka kwe-Omicron (B.1.1.529). Lo mntu wayengumhambi owabuya eMzantsi Afrika nge-22 kaNovemba 2021. Umntu, owayegonywe ngokupheleleyo kwaye wayeneempawu ezithambileyo eziphucukileyo, uzimele yedwa kwaye okoko wavavanywa ukuba unayo. Bonke abafowunelwa abasondeleyo baqhagamshelwe kwaye bavavanyiwe ukuba abanayo.
Ukulandelelana kweGenomic kwaqhutywa kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSan Francisco kwaye ukulandelelana kwaqinisekiswa kwi-CDC njengokuhambelana nokwahluka kwe-Omicron. Eli iya kuba lityala lokuqala eliqinisekisiweyo le-COVID-19 elibangelwa kukwahluka kwe-Omicron ebhaqwe eUnited States.
Ngomhla wama-26 kuNovemba ka-2021, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) wachaza uhlobo olutsha, i-B.1.1.529, njengeNxaleko yeNgxaki kwaye wayibiza ngokuba yi-Omicron kwaye nge-30 kaNovemba ka-2021, iUnited States nayo yawuchaza njengoMahluko we Inkxalabo. I-CDC iye yabeka iliso ngenkuthalo kwaye ilungiselela lo mahluko, kwaye siya kuqhubeka sisebenza ngenkuthalo kunye nezinye i-US kunye nezempilo yoluntu jikelele kunye namaqabane oshishino ukufunda ngakumbi. Ngaphandle kokufunyanwa kwe-Omicron, i-Delta ihlala iyeyona nto iphambili e-United States.
Ukuvela kwamva nje kokwahluka kwe-Omicron (B.1.1.529) kugxininisa ngakumbi ukubaluleka kogonyo, izincedisi, kunye nezicwangciso-qhinga zothintelo jikelele ezifunekayo ukukhusela kwi-COVID-19. Wonke umntu oneminyaka emi-5 nangaphezulu kufuneka afumane izincedisi zokugonya ziyacetyiswa kuye wonke umntu oneminyaka eli-18 nangaphezulu.